SEO Strategies: Maitiro Ekuwana Bhizinesi Rako Chinzvimbo MuOrganic Kutsvaga muna 2022? | Martech Zone
Tiri kushanda nemutengi izvozvi ane bhizinesi idzva, mhando nyowani, domain nyowani, uye itsva ecommerce webhusaiti muindasitiri ine makwikwi. Kana iwe uchinzwisisa kuti vatengi uye injini dzekutsvaga dzinoshanda sei, unonzwisisa kuti iri harisi gomo riri nyore kukwira. Brands nemadomasi ane nhoroondo refu yechiremera pane mamwe mazwi akakosha ane nguva iri nyore kuchengetedza uye kunyange kukura organic chinzvimbo.
Kunzwisisa SEO muna 2022
Imwe yekukurukurirana kwakakosha kwandinoita nemakambani pandinotsanangura kutsvaga injini optimization (SEO) nhasi ndizvo zvakachinja sei indasitiri. Chinangwa chechero injini yekutsvaga ndechekupa runyoro rwezviwanikwa pane peji yekutsvaga injini peji (SERP) izvo zvichave zvakakwana kune yekutsvaga injini mushandisi.
Makumi emakore apfuura, maalgorithms aive nyore. Mibairo yekutsvaga yaibva pamalink… unganidza malink akawanda edomeini yako kana peji uye peji rako rakaiswa zvakanaka. Ehe, nekufamba kwenguva, iyo indasitiri yakatamba iyi system. Mamwe makambani eSEO akatogadzira zvakarongwa kunze chinongedzo mapurazi kuwedzera zvekugadzira kutsvaga injini kuoneka kwevatengi vavo vanobhadhara.
Injini dzekutsvaga dzaifanira kuchinjika… dzaive nesaiti uye mapeji aive akarongwa aive asina basa kumushandisi weinjini yekutsvaga. The mapeji akanaka akanga asina chinzvimbo, aive makambani ane homwe dzakadzama kana nzira dzepamusoro dzekudzosera kumashure. Mune mamwe mazwi, mhando yemhinduro dzeinjini yekutsvaga yaive ichidzikira… nekukurumidza.
Injini yekutsvaga algorithms yakapindura uye nhevedzano yekuchinja yakazunungusa iyo indasitiri kune hwaro hwayo. Panguva iyoyo, ndakanga ndichirayira vatengi vangu kuti vasiye zvirongwa izvi. Imwe kambani yaienda kuruzhinji yakatondihaya kuti ndiite ongororo yezvekumashure inogadzirwa kuburikidza nehurongwa hwavo hweSEO consultant. Mumavhiki mashomanana, ndakakwanisa kuronda batanidza mapurazi kuti mupi wezano aigadzira (zvichipesana nematemu einjini yekutsvaga) uye nekuisa iyo domain panjodzi huru yekuvigwa mukutsvaga, iyo yekutanga sosi yetraffic yavo. Maconsultants akadzingwa basa isu akabvisa ma links, uye takaponesa kambani kuti isapinda mumatambudziko.
Zvinoshamisa kwandiri kuti chero SEO agency inotenda kuti ivo neimwe nzira vane hungwaru kupfuura mazana emasaenzi edata uye mainjiniya emhando anoshanda nguva yakazara paGoogle (kana mamwe mainjini ekutsvaga). Heino hwaro hwekutanga hweGoogle's organic ranking algorithm:
Peji yepamusoro-soro mumhedzisiro yekutsvaga yeGoogle yakaverengerwa ipapo nekuve yakanakisa sosi yemushandisi weinjini yekutsvaga, kwete nekutamba imwe back-linking algorithm.
Yepamusoro Google Chinzvimbo Zvinhu zve2022
Iko SEO varairidzi kubva makore apfuura vaigona kutarisa pa-saiti ine tekinoroji maficha ewebhusaiti uye kunze-saiti ine backlinks, kugona kwemazuva ano kukwirisa kunoda kunzwisiswa kuzere kweako injini yekutsvaga mushandisi uye user experience kuti iwe unovapa ivo pavanosarudza yako saiti kubva kune yekutsvaga injini mhinduro. Iyi infographic kubva Tsvuku Webhusaiti Dhizaini inoita basa rakanaka rekubatanidza iyo chepamusoro chepamusoro zvinhu Via Tsvaga Engine Journal mune izvi zvakakosha zvinhu:
Kuburitsa zvemhando yepamusoro – Patinoshanda mukuongorora nekugadzira a raibhurari yezvinyorwa kune macleints edu, tinoshanda mukugadzira zvakanakisa zvemukati tichienzanisa nemasaiti anokwikwidza. Izvi zvinoreva kuti tinoita tsvakiridzo yakawanda kugadzira peji yakazara, yakanyatsogadzirwa iyo inopa vashanyi vedu zvese zvavanoda - zvinosanganisira kudyidzana, zvinyorwa, odhiyo, vhidhiyo, uye zvinoonekwa zvemukati.
Gadzira yako saiti Mobile-Yekutanga - Kana iwe ukachera zvakadzika mune yako analytics, iwe uchaona kuti vashandisi venhare vanowanzove musimboti weiyo organic yekutsvaga injini traffic. Ndiri pamberi pedesktop yangu maawa pazuva ndichishanda… asi kunyangwe ndiri mushandisi anomhanyisa yekutsvaga injini pandinenge ndiri kunze kwedhorobha, ndichiona chirongwa cheTV, kana kungogara kofi yangu yemangwanani pamubhedha.
Vandudza Mushandisi Wako Maitiro - Makambani akawandisa anoda a dzozorodza yesaiti yavo pasina tsvakiridzo yakakwana yekuti vanoida here kana kuti kwete. Mamwe emasaiti akanakisa ekumisikidza ane akareruka peji chimiro, akajairwa navigation zvinhu, uye ekutanga marongero. Chiitiko chakasiyana hachisi icho chiitiko chiri nani… teerera kune magadzirirwo emagadzirirwo uye zvinodiwa nemushandisi wako.
Architecture Yenzvimbo -Yekutanga peji rewebhu nhasi rine zvimwe zvinhu zvinoonekwa kumainjini ekutsvaga kupfuura makumi emakore apfuura. HTML yafambira mberi uye ine maprimary and secondary elements, zvinyorwa zvemhando, navigation elements, etc. Kunyange zvazvo peji yewebhu yakafa inogona kumira zvakanaka, chivako chesaiti ndechimwe chezvinhu zviri nyore kugadzirisa pasaiti. Ndinozvifananidza nekumonera kapeti tsvuku… wadii kuzviita?
Zvikuru Webhu Vitals - Zvikuru Webhu Vitals ihwaro hwakakosha hwepasirese-chaiyo, mushandisi-yakatarisana metrics inoyera zvakakosha zveruzivo rwemushandisi wewebhusaiti. Nepo makuru emukati achigona kumira zvakanaka mumainjini ekutsvaga, makuru emukati anopfuura zvinotarisirwa mukati memetrics eCore Web Vitals zvichave zvakaoma kugogodza kubva pamusoro pezvimiro zvawanikwa.
Chengetedza Webhusaiti -Mazhinji mawebhusaiti anodyidzana, zvichireva kuti unoendesa data pamwe nekugamuchira zvirimo kubva kwavari… senge iri nyore fomu rekunyoresa. Nzvimbo yakachengeteka inoratidzwa ne HTTPS kubatana neanoshanda akachengeteka socket layer (SSL) chitupa chinoratidza kuti data rese rakatumirwa pakati pemushanyi wako nesaiti rakavharirwa kuitira kuti isatore nyore nyore kutorwa nema hacker uye mamwe ma network eku snooping. A yakachengeteka webhusaiti inofanirwa mazuva ano, hapana anosiya.
Gadzirisa Kumhanya Kwepeji -Mazuvano ekugadzirisa zvemukati masisitimu idata-base inofambiswa mapuratifomu anotarisa-kumusoro, anotora, uye anopa zvemukati kune vashandisi. Kune toni ye zvinhu zvinokanganisa peji rako kumhanya - zvese izvo zvinogona kugadziriswa. Vashandisi vanoshanyira peji rewebhu rinokurumidza kutadza kusvetuka nekubuda… saka injini dzekutsvaga nyatso tarisisa kumhanya kwepeji (Core Web Vitals inotarisisa zvakanyanya pakuita kwesaiti yako).
Pa-Peji Kugadziridza -Magadzirirwo akaitwa peji rako, kuvakwa, uye kuratidzwa kune inotsvaga injini inokambaira inobatsira injini yekutsvaga kuti inzwisise kuti chii chiri mukati uye kuti ndeapi mazwi akakosha aanofanirwa kurongedzerwa. Izvi zvinogona kusanganisira ma tag ako emusoro, misoro, mazwi akashinga, zvakasimbiswa zvemukati, meta data, akapfuma snippets, nezvimwe.
Metadata -Meta deta iruzivo rwusingaonekwe kune anoona mushandisi wepeji rewebhu asi iro rakagadzirwa nenzira inogona kudyiwa zviri nyore neinjini yekutsvaga inokambaira. Iyo yakawanda yakawanda yemapuratifomu ekutonga zvemukati uye ecommerce mapuratifomu ane sarudzo meta data minda yaunofanirwa kutora mukana wekuti zvirinani uwane zvinyorwa zvako indexed nenzira kwayo.
Schema -Schema inzira yekugadzira uye kuratidza data mukati mesaiti yako iyo injini dzekutsvaga dzinogona kushandisa nyore. Peji yechigadzirwa pane e-commerce peji, semuenzaniso, inogona kuve neruzivo rwemitengo, tsananguro, kuverenga kwezvinyorwa, uye rumwe ruzivo rucharatidzwa neinjini dzekutsvaga mune yakanyanya optimized. ruzha rwemashoko mumapeji emhedzisiro yekutsvaga injini.
Zvemukati Kubatanidza -Humambo hwesaiti yako uye kufamba kunomiririra kukosha kwezviri pasaiti yako. Iwo anofanirwa kuve akagadziridzwa ese emushandisi wako uye kuratidza kune ekutsvaga mapeji anonyanya kukosha kune ako emukati uye ruzivo rwemushandisi.
Yakakodzera uye Inotenderwa Backlinks -Manongedzo kune yako saiti kubva kune ekunze masaiti achiri akakosha pakuisa chinzvimbo, asi anofanirwa kunyatso kurongeka kana iwe uchida kusimudzira chinzvimbo chako. Blogger outreach, semuenzaniso, inogona kupa mawebhusaiti akakodzera muindastiri yako ane chinzvimbo chakakura nezviri zvinosanganisira chinongedzo kune peji rako kana domain. Nekudaro, inofanirwa kuwanwa nezvakakura zvemukati… kwete kusundidzirwa kuburikidza nespamming, kutengeserana, kana kubhadhara kubatanidza zvirongwa. Nzira huru yekugadzira yakakosha uye ine mvumo backlinks ndeyekugadzira yakakura YouTube chiteshi chakagadziridzwa. Nzira huru yekuwana zvinongedzo ndeyekugadzira uye kugovera inonakidza infographic… seRed Webhusaiti Dhizaini yakaita pazasi.
Kutsvaga Kwenzvimbo - Kana saiti yako inomiririra sevhisi yemuno, ichibatanidza zviratidzi zvemunharaunda senge macode enzvimbo, kero, maratidziro, mazita eguta, nezvimwewo zveinjini dzekutsvaga kuti unyore zvirinani zvirimo zvekutsvaga munharaunda. Zvakare, bhizinesi rako rinofanira kusanganisira Bhizinesi reGoogle uye mamwe madhairekitori akavimbika. Google Bhizinesi ichaona kuoneka mumepu yakabatana (inozivikanwawo se mepu kurongedza), mamwe madhairekitori anosimbisa chokwadi chebhizinesi rako renzvimbo.
Whew… izvo zvishoma. Uye inopa nzwisiso yekuti sei yakachena yekutsvaga tekinoroji ingori isina kukwana. Yanhasi organic yekutsvaga chinzvimbo inoda chiyero chezvemukati strategist, tekinoroji, muongorori, mushambadzi wedhijitari, nyanzvi yehukama neveruzhinji, mugadziri wewebhu… uye zvese zviri pakati. Tisingarevi kuti uchaita sei nevaenzi apo vanosvika - kubva pakutora data, kuyerwa, kutaurirana kwekushambadzira, nzendo dzedhijitari, nezvimwe.
Tags: blogger inosvikayakakosha yewebhu vitalsgooglegoogle bhizinesigoogle chinzvimbo zvinhuhttpsinfographicmukati rekubatanidzaLinksmadhairekitori emunolocal searchMetadatamobile-kutangapa-peji optimizationchepamusoro chinzvimboorganic searchoutreachpage speedpeji yekumhanyisa optimizationmamiriro ezvinhuruzha rwemashokoschemaschema.yakachengeteka webhusaitiseoseo infographicnzvimbo yekuvakisaSsluser experience